Sameecadaha dhagaha la gashado oo ku qarxay haweenay diyaarad saaran - Wargeyska Faafiye
Sameecadaha dhagaha la gashado oo ku qarxay haweenay diyaarad saaran
Maamulka Australia ayaa ka digay halista ka dhalan karta in gudaha diyaaradaha lagu isticmaalo qalabka baytariyada ku shaqeeya, ka dib markii uu dab qabsaday haweenay qabtay sameecadaha dhagaha la gashado.
Haweenayda oo laamadooda oo saaran diyaarad ka soo duushay magaalada Beijing kuna sii jeeda Melbourne ayaa ku toostay dhawaaqa qarax.
Markii ay iska tuurtay sameecadigii dhagaha ugu jiray ee ay wax ku dhagaysanaysayna waxay aragtay iyagoo uu dab qabsaday oo bilaabay in ay dhalaalaan.
Qaraxa iyo dabka ayaa wajigeeda badalay oo madoobeeyay.
Haweenaydan rakaabka ah oo aan magaceeda la shaacinin ayaa waaxda badqabka gaadiidka ee Australia u sheegtay in ay muusik dhagaysanaysay markii uu qaraxu dhacay.
Shaqaalaha diyaaradda ayaa markiiba caawiyay oo damiyay dabkii ka dhacay sameecadaha dhagaha la gashado.
Wali lama sheegin shirkadda samaysay qalabkaas, laakiin waxaa la sheegay in la rumaysan yahay in ay u badan tahay in ay ciladdu ka dhalatay baytariyada lithium-ion.
Dhawr dhacdo oo arrintaas la xiriirta markii ay diyaarado ka dhaceena waaxaha duulimaadyada hawada ee dalalka caalamka ayaa mamnuucay in diyaaradaha lala raaco taleefanka Note 7, Samsung ayaa dalbatay in dadka gatay Note 7 ay soo celiyaan, waxayna joojisay soo saaristii taleefanka.
Sanadihii u dambeeyay tiro duulimaadyo ah ayaa dhibaato kala kulmay baytariyo noocodu yihiin lithium.
Sanadkii hore diyaarad ka duuli lahayd Sydney ayaa la istaajiyay ka dib markii qiiq laga arkay qaybta boorsooyinka ee diyaaradda, ka dibna waxaa la ogaaday in baytariyo lithium ka samaysan uu dab ka kacay oo uu gaaray boorsooyinka.
Sidoo kale sanadkii tagay baytariyo ay samaysay shirkadda Samsung oo la galiyay taleefoonka Note 7 ayaa sababay in uu aad u kululaado taleefanku iyadoo kuwo badanna uu dab qabsaday oo ay dhalaaleen.
Filed in: Faafiye Latest news.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsHundreds of Al-Shabaab foreign fighters flee SomaliaBuilding Sustainable Peace.UN Envoy to Somalia urges greater role for women in state-building.Qatar’s Emir Visits Gaza, Pledging $400 Million to Hamas.Eritrea: Panel Finds No Arms Were Sent to Somali Rebels